कोरोना सङ्क्रमण ः स्थानीय तहमा ज्वरोमापन यन्त्रसमेत छैन ! – Etajakhabar
कोरोना सङ्क्रमण ः स्थानीय तहमा ज्वरोमापन यन्त्रसमेत छैन !
तारानाथ आचार्य – कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै बागलुङका स्थानीय तह व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले पूर्वाधार निर्माण थालेका छन् भने कतिपयले सामान्य ज्वरो जाँच गर्ने यन्त्रको समेत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । नेपाली सेना र प्रहरीले तयार पारेका पूर्वाधारको भरोसामा बागलुङ नगरपालिका धवलागिरि अञ्चल अस्पताल सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक पिपीइको व्यवस्थापनमा सक्रियता बढाइएको छ भने प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी र केन्द्रलाई तयारी अवस्थामा राखिएको नगर कार्यपालिकाले जनाएको छ ।
Posted on: Thursday, March 26, 2020 Time: 11:00:32
-12712 second ago
-11997 second ago
-6318 second ago
-2928 second ago
-2026 second ago